NoFap တည်ထောင်သူ Alexander Rhodes အသရေဖျက်မှုဖြင့် Nicole Prause / Liberos - Your Brain On Porn
On အောက်တိုဘာလ 23, 2019 အလက်ဇန်းဒါး Rhodes (တည်ထောင်သူ reddit / nofap နှင့် NoFap.com) သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည် နီကိုးလ် R ကိုချီးမွမ်း နှင့် Liberos LLC။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ဒီမှာတရားရုံးစာရင်း. Rhodes မှ တင်သွင်းသော မူလတရားရုံး စာရွက်စာတမ်း သုံးခု၏ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သော PDF များ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော screenshots များ):
Nicole Prause ကို Alex Rhodes အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှု - ကန ဦး တိုင်ကြားချက် - စာမျက်နှာ ၁၅ မျက်နှာ။ (တိုင်ကြားချက်၏ screenshots များ အောက်တွင်)
Nicole Prause ကိုပြသသည့် Alex Rhodes - ပြပွဲနံပါတ် ၁ - ၂၁ မျက်နှာ။ (ပြပွဲ 1 ၏ဖန်သားပြင်များ အောက်တွင်)
Nicole Prause ပြပွဲနံပါတ် ၂ မှ ၁၅ မျက်နှာအထိ Alex Rhodes အသရေဖျက်မှု။ (screenshots များသည်2ကိုပြသည် အောက်တွင်)
UPDATE # 1: ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တွင်အဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်နီကိုးလ်ပရာ့စ်အားသူ၏ပြင်ဆင်ချက်ကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ တရားရုံးတင်မှုအသစ်တွင်မကြာသေးမီကအသရေဖျက်မှုအဖြစ်အပျက်များပါ ၀ င်သည် (အဲလက်စ်ကိုညစ်ညမ်းရန်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပူးပေါင်းသည်ဟုစွပ်စွဲခြင်းများ) နှင့်အခြား Prause သားကောင်များမှကျမ်းကျိန်လွှာများကျိန်ဆိုခြင်း ပြင်ဆင်ထားသောတိုင်ကြားချက်တွင်တင်ထားသောတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများ၏ကူးယူနိုင်သည့် PDF ဖိုင်များ -
ပြကွက် - ၁– ပစ်စ်ဘာ့ဂ်တက္ကသိုလ် (၁ စာမျက်နှာ) နှင့်ဆက်စပ်မှုကိုချီးမွမ်းပါ။
ပြကွက် ၂ - ပစ်စ်ဘာ့ဂ်တက္ကသိုလ် (၅ စာမျက်နှာ) နှင့်ဆက်စပ်မှုကိုချီးမွမ်းပါ။
ပြကွက် ၃ - Nicole Prause နှင့် @BrainOnPorn တို့၏ Screenshots Alex Rhodes (စာမျက်နှာ ၆၁ ခု)
ပြကွက် ၄ - NoFap ၏ပို့စ်တင်စည်းကမ်းများနှင့်ကျင့်ဝတ်လမ်းညွှန်ချက်များ (စာမျက်နှာ ၁၅ ပါ)
ပြကွက် ၅ - John Adler, MD ကျမ်းကျိန်လွှာ (စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ)
ပြကွက် ၆ - DJ Burr၊ LHMC ကျမ်းကျိန်လွှာ (စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ)
ပြကွက် ၇ - Stefanie Carnes၊ PhD ကျမ်းကျိန်လွှာ (၂ မျက်နှာ)
ပြကွက် ၈ - Geoff Goodman၊ PhD ကျမ်းကျိန်လွှာ (စာမျက်နှာ ၃ မျက်နှာ)
ပြကွက် ၉ - Laila Mickelwait / Exodus Cry affidavit (စာမျက်နှာ ၆ မျက်နှာ)
ပြကွက် ၁၁ - Gary Wilson ကျမ်းကျိန်လွှာ (စာမျက်နှာ ၁၂၃)
ပြကွက် ၁၂ - Prause သည်အဲလက်စ်ရိုဒ်စ်အားဟီလ်တန်တရားစွဲဆိုမှု (စာမျက်နှာ ၃ မျက်နှာ) တွင်တင်သွင်းရန်ငြင်းဆိုသည့်အဆိုကိုပယ်ချခဲ့သည်။
ပြကွက် ၁၃ - Prause မှစွပ်စွဲထားသောအချက်အလက်များ - တိကျမှန်ကန်သော၊
ပြကွက် ၁၄ - Prause မှစွပ်စွဲထားသောအဖြစ်မှန် - တိကျမှန်ကန်မှုမရှိသော၊
UPDATE # 2: ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၂၃ ရက်အဲလက်စ်ရော့ဒ်သည် Prause အားပယ်ချရန်အဆိုကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ တရားရုံးတင်မှု ၃ ခု၏ PDF ဖိုင်တွင် -
အဲလက်စ်ရိုဒ်စ်ကြေငြာချက် (မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၀) - စာမျက်နှာ ၆၄ မျက်နှာ။
အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်၏ပြပွဲများ (မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၀) - စာမျက်နှာ ၅၇ မျက်နှာ။
ဤသူကား 2019 ခုနှစ်တွင်နီကိုးလ် Prause ဆန့်ကျင်တင်သွင်းဒုတိယအသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှု! ပထမက Donald ဟီလ်တန်, MD အားဖြင့်တင်သွင်းခဲ့သည်, နှင့်9Prause ၏အခြားသားကောင်များမှကျိန်ဆိုကျမ်းကျိန်လွှာပါရှိသည်။
အောက်တိုဘာလ 23, 2019 Alexander Rhodes (တည်ထောင်သူ reddit / nofap နှင့် NoFap.com) သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည် နီကိုးလ် R ကိုချီးမွမ်း နှင့် Liberos LLC။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ဒီမှာတရားရုံးစာရင်း.
ဒေါက်တာ Prause ဖြစ်ပါတယ် အနီးကပ်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ alignedသူမရဲ့ဒီပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း (ညာဘက်) 2016 X-Rated ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ (XRCO) ဆုအခမ်းအနားတွင်အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည်။ (အဆိုအရ ဝီကီပီးဒီးယား"XRCO ဆုကို American X-Rated Critics Organization မှနှစ်စဉ်ပေးအပ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်သောသူများအားစက်မှုလုပ်ငန်း ၀ င်များအတွက်သီးသန့်သီးသန့်သီးသန့်ထားရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုများဖြစ်သည်။"
ဤကျယ်ပြန့်သောစာမျက်နှာများပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း - စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ3- Rhodes နှင့် Hilton တို့၏တရားစွဲဆိုမှုများသည် Prause ရေခဲတောင်ထိပ်ပေါ်မှပြသခဲ့သည်။ သူမ၏သားကောင်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစာရင်းတွင်သုတေသီများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ, ကုထုံး, စိတ်ပညာရှင်ဟောင်း UCLA လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး, ဗြိတိန်ပရဟိတ, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ယောက်ျား, အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry, NoFap.com, RebootNation, YourBrainRebalanced သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း။ ဒီထွက်စစ်ဆေးပါ Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသောအစီရင်ခံမှုပုံစံကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း PDF (များအတွက်အောက်တွင်ကြည့်ပါ ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?).
တရားရုံးမှစာရွက်စာတမ်းများတွင်အဲလက်စ် Prause ၏လက်ထဲတွင်အဲလက်စ်၏ခံစားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖော်ပြသည်။ သူတို့ကမျိုးပွားနေကြသည် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လာမည့်အပိုဒ်အောက်။ အသေးစိတ်သိလိုပါကဤစာမျက်နှာရှိလင့်ခ်များစာရင်းကိုကြည့်ပါ။ Nicole Prause၊ RealYBOP နှင့် David Ley တို့၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်း NoFap မှ Alexander Rhodes အားအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းတို့၏သမိုင်း။ link တစ်ခုစီသည်အများအပြား၏ပိုမိုပြည့်စုံသောဖော်ပြချက်ကိုသွားသည် လူသိများ အားဖြင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အသရေဖျက်မှုဖြစ်ပွားမှု နီကိုးလ် Prause, ဒါဝိဒ်သည် Leyနှင့် “ RealYourBrainOnPorn” တွစ်တာ:
၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ - Prause alias ကို YourBrainRebalanced တွင်တင်ထားသည်။ သူ၏လိင်တံအရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍ ဂယ်ရီ Wilson အားမေးမြန်းခဲ့သည်။ Wilson, သူ့ဇနီး Alex Rhodes, Donald Hilton နှင့် misogynist နှင့်သဘောမတူသူအားလုံးကိုခေါ်ဆိုရန်လှုပ်ရှားမှုမှစတင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ။ ။ Prause & David Ley သည် NoFap ကိုတည်ထောင်သူ Alexander Rhodes အားတိုက်ခိုက်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ Prause & သူမ၏ alias“ PornHelps” သည် Alexander Rhodes အားသူသည်လိင်မှုကိစ္စပြpornနာများကိုအတုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ, 2016: Prause မုသားသက်သေခံမှု NoFap ၏အလက်ဇန်းဒါး Rhodes နှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကတိပြု
ဒီဇင်ဘာလ 12, 2016: Prause မဟုတ်မမှန် @Nofap ခံစားချက်တွေကို suicidal မှလိင်တူချစ်သူဆယ်ကျော်သက်မောင်းဆိုပါတယ် (လည်းအလက်ဇန်းဒါး Rhodes တစ်ခု "Anti-porn အမြတ်အစွန်း" ခေါ်ဆို)
24-27 စေခြင်းငှါ, 2018: Prause အဆိုပါ Nofap ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်ရန်မျိုးစုံ SOCKS-ရုပ်သေးဖန်တီး
၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ - Ley & Prause သည်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို Gary Wilson၊ Alexander Rhodes၊ Gabe Deem နှင့်အဖြူရောင် supremacists / ဖက်ဆစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ရည်ရွယ်သည် (မှတ်ချက်များအပိုင်းရှိ Alexander Rhodes & Nofap)
၂၀၁၈ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၂ - တွစ်တာတွင် Alexander Rhodes နှင့် Nofap.com ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခြင်းအားဖြင့် "ဖက်ဆစ်" ဆောင်းပါးကိုချီးမွမ်းရေးသားသည်
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - David Ley & Nicole Prause သည်နာဇီကိုထောက်ခံအားပေးသူများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်ဟုပြောဆိုခြင်းဖြင့် YBOP / Gary Wilson & Nofap / Alexander Rhodes ကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားနေသည်။
အောက်တိုဘာလ, 2018: သူမ FBI ကဖို့ "အမှတ်စဉ် misogynist နှောင့်ယှက်" အလက်ဇန်းဒါး Rhodes ကဖော်ပြခဲ့သည်မူကြောင်းကို Prause tweets
ဒီဇင်ဘာလ 2018: FBI ကနီကိုးလ် Prause အလက်ဇန္ဒား Rhodes အပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုလိမ်လည်သည်ဟုအတည်ပြု
နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာ - Prause သည်သူမအကြောင်းမဲ့၊
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ: Prause သည် Xhamster နှင့်ပူးပေါင်းပြီး NoFap & Alexander Rhodes ကို smear ရန်၊ Prause သည်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည့် Hit-piece ကိုထုတ်ဝေရန် Fatherly.com ကိုသွေးဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ - နီကိုးလ် R Prause & Liberos LLC ကို Donald Hilton ၏အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းကို Alexander Rhodes ကအတည်ပြုခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ၊ စက်တင်ဘာလ - နီကိုးလ်ပရာ့စ်နှင့်ဒေးဗစ်လီတို့သည်ဒွန်ဟီလ်တန်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုတွင်မမှန်သောသက်သေကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ၊ စက်တင်ဘာ - NoFap ပါ ၀ င်သော CNN အထူးတုံ့ပြန်မှုအရ RealYBOP twitter (Prause & Burgess မှဖွင့်လှစ်ထားသော) Nofap မှ Alex Rhodes (tweets ၃၀ ကျော်) အားရှုတ်ချနှောက်ယှက်ပါသည်။
၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၉ RealYBOP twitter (Prause & Daniel Burgess) သည် Alex Rhodes & Gabe Deem အားနှစ်ဖက်စလုံးမှ realyourbrainonporn အား“ ဖြိုချရန်” ကြိုးစားခဲ့သည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်။
၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၀– Alex Rhodes RealYBOP twitter (Prause & Daniel Burgess) ပါဝင်သော“ ဆရာဝန်များ” အားတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် Rhodes ကိုတွစ်တာများဖြင့်စော်ကားနှောက်ယှက်ခြင်း (တွစ်တာကို NoFap ကို de-platform မှတောင်းဆိုသည်)
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုတွင်နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်နှင့် @BrainOnPorn twitter သည်ရိုဒ်စ်အားမဆိုင်းမတွအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်း (Prause ၏အသရေဖျက်မှုကိုထည့်ခြင်း).
ဇန်နဝါရီ - မတ်လ၊ ၂၀၂၀ - အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်၏“ Donor Box” ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင် Prause သည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာဗြိတိန်ဆောင်းပါးကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ / မတ်လ၊ Prause (အဲလက်စ်ရိုဒ်စ်) သည် Pennsylvania ပြည်နယ်စိတ်ပညာဘုတ်အဖွဲ့တွင်လိုင်စင်မရှိဘဲစိတ်ပညာကိုကျင့်သုံးခြင်းအတွက်သတင်းပို့ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် CNN ကအခြားလူငယ်များနှင့်အုပ်စုတွင်သူနှင့်အတူ porn ၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၏ screenshots ကန ဦး တိုင်ကြားချက် - စာမျက်နှာ ၁၅ မျက်နှာ -
၏ screenshots ပြကွက် ၁ - ၂၁ မျက်နှာ -
၏ screenshots ပြပွဲ # 2- 15 စာမျက်နှာများ -
နှစ်ပေါင်း Prause နှင့် Ley နှစ်ဦးစလုံး, ရဖျက်နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရဲ့ပျက်ဆီးသတိပေးသို့မဟုတ် porn ရဲ့ပျက်ဆီးသတင်းပို့သုတေသနထုတ်ဝေဘူးသောဆိုက်ဘာအညှာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှတက်ပူးပေါင်းပါပွီ။ မကြာသေးမီက Prause နှင့် Ley တစ်ဦးညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ထောက်ခံမှုမှာသူတို့ရဲ့သိက္ခာမဲ့နှင့်မကြာခဏတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, 0n ဇန်နဝါရီလ 29, 2019, Prause တစ်ဦးတင်သွင်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာ YOURBRAINONPORN နှင့် YOURBRAINONPORN.COM ရရှိရန်။ ဧပြီလ 2019 ခုနှစ်, Prause နှင့် Ley ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်စေ့စပ် ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု of YourBrainOnPorn.com "RealYourBrainOnPorn.com ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်။
2019 ဇူလိုင်လတွင် David Ley နှင့်လူသိများသော RealYBOP“ ကျွမ်းကျင်သူများ” (Justin Lehmiller နှင့် Chris Donaghue) တို့သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။3အားလုံးသည်အပေါ်တွင်ရှိသည် အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ ထောငျခါ၏ လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) ။ အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးဗြောင်ကျကျဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများတွင်, ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့် SHA များမှာ porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်!
နီကိုးလ် Prause နောက်ထပ်
2013 ဟောင်းတဦး UCLA မှသုတေသီနီကိုးလ် Prause အတွက် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဂယ်ရီ Wilson က, နှောင့်ယှက် libeling နှင့် cyberstalking စတင်ခဲ့သည်။ (Prause ဇန်နဝါရီလ, 2015 ကတည်းကတစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ) တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသူမလည်းသုတေသီများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေ, ကုသ, စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးကယခင် UCLA ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကိုဗြိတိန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနာလန်ထူအတွက်ယောက်ျားတစ်ဦးအပါအဝငျအခွားသူမြားပစ်မှတ်ထားစတင်ခဲ့သည် အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry, NoFap.com, RebootNation, YourBrainRebalanced သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း.
အခြားသူများကိုနှောင့်ယှက်သူမနိုးနာရီဖြုန်းနေစဉ်, Prause ပါးနစိုက်ပျိုး - သုညသက်သေအထောက်အထားနှင့်အတူ - တစ်ဒဏ္ဍာရီ သူမက "သားကောင်" ခဲ့ ညစ်ညမ်းသောသက်ရောက်မှုများနှင့်လက်ရှိသုတေသနပြုမှုအခြေအနေနှင့် ပတ်သတ်၍ သူမ၏တာဝန်မဲ့သောပြောဆိုချက်များကိုသဘောမတူဝံ့သူမည်သူမဆိုအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများကိုတန်ပြန်ရန် YBOP သည် Prause ၏လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖိအားပေးခံခဲ့ရသည်။ အောက်ပါစာမျက်နှာများကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ (နောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်များမှာကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Prause ၏သားကောင်များသည်ထပ်မံအပြစ်ပေးခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်)
porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com") (နီကိုးလ်ပရာ့စ်၊ မာတီကလိန်း၊ လင်နေးလာ၊ ဒေးဗစ်ဂျေလီ၊ အမ်မလီအက်ဖ်ရော့သ်မန်း၊ ရှမွေလပယ်ရီ၊ တေလာကိုဟွတ်၊ Justin Lehmiller၊ Victoria Hartmann၊ Julia Velten, Roger Libby, Doug Braun-Harvey၊ David Hersh၊ Jennifer Valli၊ Madita Oeming၊ Kate Dawson, Eric Sprankle)
စအဦး၌ Prause အပေါ် post မှအတု username များများစွာအလုပ် porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များ, Quora, ဝီကီပီးဒီးယား, ထိုအတွက် မှတ်ချက်အပိုင်း ဆောင်းပါးတွေအောက်မှာ။ Prause မရှိသလောက်သူမ၏အမည်ရင်းသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လူမှုမီဒီယာအကောင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ UCLA (ဇန်နဝါရီ, 2015 န်းကျင်) Prause ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန်ကိုရွေးတော်မပြီးနောက်သမျှသောပြောင်းလဲသွားတယ်။
မဆိုကြီးကြပ်မှုနှင့်ယခု Self-အလုပ်ကနေလွတ်မြောက်, Prause ကဆက်ပြောသည် နှစ်ခုမီဒီယာမန်နေဂျာ / ဖြစ်မြောက်ရေးကနေ မီဒီယာ2×3သူမ၏ကုမ္ပဏီ၏အလွန်သေးငယ်သောတည်ငြိမ်ရန် "ပူပေါင်းဆောင်ရွက်။ " (erstwhile မီဒီယာ2×3သမတ Jesse ပှနျးတစ်ဦးကဲ့သို့မိမိကိုမိမိဖော်ပြထားတယ် ဟောလိဝုဒ်မီဒီယာနည်းပြများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ကျွမ်းကျင်သူ.) သူတို့အလုပ်သူတို့ ရန်ဖြစ်ပါသည် နေရာအရပ်ဆောင်းပါးများ စာနယ်ဇင်းအတွက် Prause featuring, သူ့ကိုရှာဖွေ စကားပြောတွေ့ဆုံမှု လိုလားတဲ့ porn နှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းနေရာများ။ တစ်ပါမယ်ဘက်မလိုက်သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်ထူးဆန်းနည်းဗျူဟာ။
Prause ဆိုက်ဘာ-နှောင့်ယှက်မျိုးစုံတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများလူမှုရေးမီဒီယာပေါ်နှင့်အခြားနေရာများတွင်ထင်ရှားစွာ, အမှားဆိုတာသိစေချင်တယ်မှသူမ၏နာမကိုအမှီထားတော့တယ်။ Prause ၏အဓိကပစ်မှတ်ဂယ်ရီ Wilson က (ထိုမြင်ကွင်းများနောက်ကွယ်မှအီးမေးလ်ကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်အတူလူမှုရေးမီဒီယာမှတ်ချက်များရာပေါင်းများစွာ) ခဲ့ကတည်းကကြောင့် Prause ရဲ့ tweets နှင့်ပို့စ်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤသည်သူမ၏သားကောင်များ '' ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဘို့ပြု, နှင့်မည်သည့်အနာဂတ်ဥပဒေရေးရာလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အလွန်အရေးပါခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းကိုသွယ်ဝိုက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ကြော်ငြာ hominem သူမက "ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ" (မကြာခဏကဤပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏သားကောင်ဖြစ်ဟုဆိုကာ) အဖြစ်အမည်တပ်ထားသောကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပစ်မှတ်ထားမှတ်ချက်။ ဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်: စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2.
အထူးသဖြင့် FSC (အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း), AVN (အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုသတင်း), ညစ်ညမ်းထုတ်လုပ်သူများ, အဆိုတော်, သူတို့၏အစီအစဉ်များ
အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်၎င်း၏ရှေးခယျြသောရာထူးသူမ၏ကျန်းမာသန်စွမ်းထောက်ခံမှု - အောက်ပါစာမျက်နှာများ #2 နှင့်ဆက်စပ်သော tweets နှင့်မှတ်ချက်များတစ်နမူနာဆံ့။ YBOP Prause ရဲ့တစ်ဖက်သတ်ကျူးကျော် (မဟုတ်မမှန် "ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူမ၏နောက်ယောင်ခံ" "misogyny", "သူမရဲ့မုဒိမ်းကျင့်ရန်အခြားသူများကိုအားပေးအားမြှောက်" နှင့် "Neo-နာဇီဖြစ်ခြင်း" ၏သူမ၏အများအပြားသားကောင်များစွပ်စွဲ) ထိုသို့သောမကြာခဏနှင့်မဆင်မခြင်ရေဖျက်မှုမှဆိုးရွားလာခဲ့သည်သောအမြင်သည် ကျနော်တို့သူမ၏ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ရင်းဆနျးစစျဖို့မဖြစ်မနေရှိကြ၏။ ဤသည်ပစ္စည်း4အဓိကကဏ္ဍများသို့ကွဲပြား:
2015 အတွက်အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း Prause အကူအညီများကမ်းလှမ်း: သူမလက်ခံနှင့်ချက်ချင်းကျားကန် 60 (porn အတွက်ကွန်ဒုံး) တိုက်ခိုက်
အဆိုပါအခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်းစွပ်စွဲ porn စွဲ "debunks" တဲ့ Prause လေ့လာမှုများအတွက်ဘာသာရပ်များပေးအပ်
porn စက်မှုလုပ်ငန်းအဆိုတော်, ဒါရိုက်တာနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူ Prause ရဲ့ရငျးနှီးဆက်ဆံရေး
အပိုင်း 4: "RealYBOP": Prause နှင့်အပေါင်းအသင်းတစ်ဦးလိုလားသူ porn စက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုထောက်ပံ့သောကတဖက်သတ်က်ဘ်ဆိုက်နှင့်လူမှုမီဒီယာအကောင့်ဖန်တီးပါ။
ဒါဝိဒ်သည် Ley နောက်ထပ်
အကျိုးစီးပွားသည်ဒါဝိဒ် Ley ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများကို (ကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကိုထောက်ခံ) ထင်ရှားပုံရသည်။
ကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကိုထောက်ခံ #1: စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများတွင်, ဒါဝိဒ်သည် Ley ဖြစ်ပါသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးက X-ဟမ်းစတားများကလျော်ကြေးငွေခံရ ၎င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုကြော်ငြာရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္sာရီဖြစ်သည်ဟုသုံးစွဲသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ အထူးသဖြင့် David Ley နှင့်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) ရှိ တစ်ဦးက X-ဟမ်းစတားက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူပူးပေါင်း (မြှောင်-Chat ကို) ။ မြင် "Stripchat သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန် porn-ဗဟိုပြုဦးနှောက်လေဖြတ်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ aligns":
ထောငျခါစလိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်အခြားနှစ်ဦးကိုလည်းပါဝင်သည် RealYourBrainOnPorn.com "ကျွမ်းကျင်သူများက" (Justin Lehmiller & Chris Donahue) ။ RealYBOP သည်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးလိုလားသူ pornကဦးဆောင်, Self-ဟစျကျွောကွ "ကျွမ်းကျင်သူများက" နီကိုးလ် Prause။ ဤသည်မှာလည်းလက်ရှိစေ့စပ်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင် တရားဝင် YBOP ဆီသို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းစွာထားပါ YBOP နှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေကိုလည်းညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကပေးဆောင်လျက်ရှိသည် ယင်း၏ / မိမိတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် porn နှင့် cam က်ဘ်ဆိုက်များမျှပြဿနာများ (မှတ်ချက်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသုံးစွဲသူများကအာမခံမှ: နီကိုးလ် Prause အဖြစ် porn စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်နီးစပ်သောပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ် ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်).
ဘက်လိုက်? Ley ၏ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဆေးရွက်ကြီးဆရာဝန်များ, နှင့်လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာကိုသတိရ ဆေးရွက်ကြီး Institute မှ။
ကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကိုထောက်ခံ #2 ဒါဝိဒ်သည် Ley ဖြစ်ပါသည် paid ခံရ porn နှင့်လိင်စွဲ debunk ရန်။ အဆံုးမှာ ဤ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ် Ley ဤသို့ဆို၏
ကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကိုထောက်ခံ #3: Ley "ပိုက်ဆံလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ (ငြင်းပယ်နှစ်ခုစာအုပ်တွေရောင်းစေသည်လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား"2012 နှင့်"Dick များအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ Porn,"2016) ။ (porn ကုမ္ပဏီကြီး MindGeek ကပိုင်ဆိုင်သော) Pornhub porn အကြောင်းကို Ley ရဲ့ 2016 စာအုပ်များအတွက်စာရင်းငါးခုကိုပြန်-ဖုံးထောက်ခံချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
ကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကိုထောက်ခံ #4: နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ဒါဝိဒ်သည် Ley မှတဆင့်ပိုက်ဆံစေသည် ကျဲအိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသူ့နှစ်ခုစာအုပ်များ (ရာမဆငျမခွ (ထဲမှာထွက် set?) ဟာစွဲ-deniers '' သဘောတရားလေ့လာမှုများများစွာနှင့်အသစ်များ၏အရေးပါမှုကိုလျစ်လျူရှုအားပေးအားမြှောက်ဘယ်မှာ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder ရောဂါ ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အဖြေရှာတဲ့ကို manual ထဲမှာ။ Ley porn သူ၏တဖက်သတ်အမြင်များ featuring ကသူ၏များစွာသောဆွေးနွေးပွဲများများအတွက်လျော်ကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ 2019 တင်ဆက်မှုများတွင် Ley ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ပေါ်လာသော: ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အပြုသဘောဆောင်သောလိင်မှုနှင့်တာဝန်ယူတတ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်း။ "